Wethembisa ukwengeza la kushiye khona uLampard umqeqeshi omusha weChelsea - Impempe
Wethembisa ukwengeza la kushiye khona uLampard umqeqeshi omusha weChelsea
Ngeke akuhlakaze akufice sekwakhiwe nguFrank Lampard umqeqeshi omusha weChelsea FC, uThomas Tuchel waseGermany oqokelwe kulesi sikhundla ngoLwesibili.
UTuchel (47), okulindeleke ukuthi abe sebhentshini ngoLwesithathu uma iChelsea isibhekene neWolves, unikwe inkontileka yezinyanga ezingu-18 ngesivumelwano sokuthi izokwelulwa uma zivumelana zombili izinhlangothi.
UTuchel uthatha izintambo nje kwiChelsea, isendaweni yesishiyagalolunye kodwa lo mqeqeshi oxoshwe isigubhukane yiParis Saint-Germain (PSG) yaseFrance ngoDisemba yize edle izicoco kumele afake amaBlues kwiChampions League.
Lo mqeqeshi obazi ukusuka nokuhlala oChristian Pulisic, Kai Havertz, Antonio Rudiger noTimo Werner kwazise uke wasebenza nabo kwiBorussia Dortmund, ungumqeqeshi ka-14 weChelsea kusukela leli qembu lathengw yinkinsela yaseRussia enguRoman Abramovich ngo-2003.
“Ngiyaziqhenya ngokuqokelwa lo msebenzi obaluleke kangaka ebholeni lomhlaba. Mina nethimba lami sizizwa sihloniphekile.
“Kusemqoka ukukucacisa ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe nguFrank (Lampard) nakanjani sizowuhlonipha ngoba uyabonakala.
“Angisakwazi ukulinda sengijahe ukuba yingxenye yale ligi enkulu kunawo wonke emhlabeni,” usho kanje uTuchel ngoLwesibili kwi-website yeChelsea.
Ezakamuva, Ibhola Laphesheya
Previous Previous post: Kusale kancane baxhimfizane ngesibhakela oLukaku no-Ibrahimovich
Next Next post: Kuyamcika umqeqeshi weBaroka ukukhetha imidlalo kwabadlali bakhe